Famatsiam-bola: hivory tsy ara-potoana ny parlemanta | NewsMada
Famatsiam-bola: hivory tsy ara-potoana ny parlemanta
Nolanian’ny filankevitry ny minisitra, omaly, teny Iavoloha ny didim-panjakana mampiantso fivoriana tsy ara-potoana ireo parlemantera ny 3 aogositra izao. Anisan’ny anton’ny fivoriana ny ahafahana manome fankatoavana ny fifanarahana fiaraha-miasa amin’ny Banky iraisam-pirenena sy ny hampiasana izany famatsiam-bola izany. Tafiditra ao anatin’izany ilay famatsiam-bola mitentina 490 tapitrisa dolara natao sonia, omaly, teny Iavoloha.
Hividianana vaksiny ny 100 tapitrisa dolara
Tsiahivina fa mitsinjara tahaka izao izany hampiasana ny vola izany. Eo aloha ny 100 tapitrisa dolara hatokana hanamafisana ny tetikasa hividianana vaksiny hiarovana amin’ny covid-19… Hohamafisina amin’izany koa ny lafiny ara-pahasalamana.
Hatokana ho amin’ny tetikasa ara-toekarena kosa ny 150 tapitrisa dolara na ilay antsoina hoe “projet de transformation economique pour la croissance inclusive (Pic 3), ahafahana manarina io sehatra io, taorian’ny krizy ara-pahasalamana.
Ny momba ny “Fond souverain”
Ny 200 tapitrisa dolara kosa, ho an’ny tetikasa maharitra momba ny fanamboaran-dalana. Tafiditra ao anatin’izany ny lalana mirefy 1 200 km. Manampy izany ny 40 tapitrisa dolara hatokana ho an’ny fambolena. Ezahina horaisina mandritra io fivoriana ara-potoana io ny fanapahanan-kevitra momba ny antsoina hoe “Fond souverain”, araka ny tatitry ny filankevitry ny minisitra hatrany.
Association Varatava: un mois d’activités autour du dessin et de la peinture 02/08/2021
Comnat – Unesco: un comité de gestion du patrimoine documentaire sur pied 02/08/2021
Optima Business: un tarif dédié aux entreprises, en gestation 02/08/2021
Mahajanga: vente aux enchères au bureau de la doune 02/08/2021
Semi-marathon – Championnat de Madagascar: Mampitroatse en balade chez lui, Nathalie en révélation 02/08/2021